Dhex-dhexaadiyaasha Daawada, Dhexdhexaadiyeyaasha Noolaha, Hormoonnada isteeroydhiska - Dumi
Warshad Si Toos ah u Siisa Tayada Benzylisop ...
CAS 37148-48-4 4-Aamino-3, 5-Dichloroacetophenon ...
5086-74-8, Tetramisole hydrochloride ujeedka ...
Shanghai Dumi Biotechnology Co., LTD waxay u heellan tahay R&D iyo soosaarka alaabada kiimikada. Waxaan ku dadaalnaa inaan siino alaabada iyo adeegga ugu fiican macaamiisha adduunka oo idil. Waxaan leenahay warshad gaar ah, koox u gaar ah, iyo nidaam adeeg oo dhameystiran.
Anaga ahaan, hubinta tayada waa ballanqaadkeena macaamiisheena.
Waxaan damaanad qaadeynaa in xirmadaadu ay mari doonto 100% Mareykanka, UK, Australia, Netherlands, Canada, France, Germany, Spain, Belgium, Sweden, Poland, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic, Slovakia, Portugal. Waxaan ku haynaa xamuulyaal xamuul dalalkan / goboladan, shirkaddeena nadiifinta kastamkuna waxay kaa nadiifin doontaa baakadahaaga iyada oo aan laga hadlin arrimaha kastamka, mararka qaarkood xitaa 1000 kg. Albaab ilaa albaab. Hubso inaad heshay 100% alaabta. U oggolow inaad khibrad wanaagsan u leedahay awooddayada xamuulka ee xoogga badan.
Qolka J, Deegaanka E, 1 / F, Dhismaha 4, No. 358_368, Kefu Road, Degmada Jiading, Shanghai
Dhimashada Sintetiga ah Ee Ka Hortaga Qaybaha Parti Waxay Dhigi Kartaa Unugyada Kansarka
Inkasta oo Iniparib uu leeyahay rikoodh liita oo ku saabsan guuldarada, ka-hortagayaasha PARP waxay ku soo laabteen fagaaraha kansarka naasaha ka dib markii ay ka soo gudbeen xayndaabka kansarka ugxansidaha ugxan sidaha.
Dhexdhexaad Dabiici –Benzylisopropylamine
Benzylisopropylamine conditions Xaaladaha muuqaalka: crystal weyn oo hufan. Xaaladaha keydinta: Ku kaydso bakhaar qabow oo hawo leh. Ka fogow dabka iyo kuleylka. Waa in si gaar ah loo kaydiyaa ...
Kala soocida dhexdhexaadiyaasha dawooyinka
Dhexdhexaadinta caafimaadka waxaa loo qaybin karaa antibiyootikada dhexdhexaadka ah, antipyretic iyo xanuun joojiyeyaasha dhexdhexaadka ah, dhexdhexaadiyaasha caafimaadka wadnaha, kuwa dhexdhexaadka ah ee daaweynta kansarka ...
Aashitooyinka dabiiciga ee biyo-baxa
Asiidhyada dabiiciga ahi waxay tixraacaan qaar ka mid ah iskudhisyada dabiiciga ee leh aashitada. Aashitada ugu caansan ee loo yaqaan 'organic acid' waa karboksylicka, oo aashitadiisu ka timaaddo kooxda carboxyl. Kalsiyum methyl, acetic acid, iwm waa kuwo dabiici ah a ...